samachar - Page 21 of 25 - Just another WordPress site
मोटी केटीसँग बि’हे गर्दा यति धेरै फाइदा (हेर्नुहोस)
samacharpostdainik April 9, 2022 रोचक ~ खबर	0
अहिले त ट्रेन्ड नै चलिसकेको छ कि पातलो ज्या’न भएकी केटी मात्रै सुन्दर हुन्छिन् भन्ने । त्यसैले हरेक केटाको रोजाइमा पातलो ज्या’न भएकी केटी नै पर्छिन् । तर आज हामी यस्तो स’त्यताबारे बताउँदै छौं जो जानेर तपाई अ’वि’वाहित हुनुहुन्छ भने मोटी केटीसँग बि’वाह गर्न मनाही गर्नुहुने छैन । मोटी केटीसँग विवाह गर्नुका
उच्च रक्तचाप कम गर्ने घरेलु उपाय ! पढौं
samacharpostdainik April 9, 2022 स्वास्थ	0
उच्च रक्तचापलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ । विना कुनै लक्षण पनि यसले शरीरमा गम्भीर रोगहरू निम्त्याउन सक्छ । रक्तचाप उच्च भए शरीरमा रक्तसञ्चार सामान्यबाट उच्च हुने गर्छ । रक्तचाप उच्च भएमा हृदयाघात, स्ट्रोक, मिर्गौला फेललगायतका समस्या निम्तनसक्छन् । शरीरमा जब रगतको दवाव १२०/८० एमएम एचजी भन्दा उच्च हुन्छ तब व्यक्तिलाई उच्च रक्तचापको समस्या
मसँगै जापान जाने अनि संगै बस्ने एउटा इमान्दार केटा चाहियो (तुरुन्तै स’म्पर्क गर्नुहोस्)
म काठमान्डौमा बेचलर रनिङमा पढ्दैछु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमेन्ट हो । त्यसकारणा जापन जानको लागी मैले लगभग स’म्पुर्ण तयारी गरिसकेको छु । त्यसैले मैले यो सोचेकी म अब पढ्न जाने हो । मेरो लगभग उमेर पनि पुगीसकेको छ । साथमा मैले वि’वाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लग्न सके भने उसले नि
किम्बुको अङ्ग्रेजी नाम व्हाइट मलबेरी हो । यसले ट्युमर , मधुमेह जस्ता रोगहरुलाई निको पार्नुको साथै विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धि फाईदाहरु पुर्याउँदछ । धेरै बिरुवाहरु रोगलाई निको पार्ने गुण भएपनि औषधिको रुपमा चिनिदैंन । किनकी यसको प्रयोग धेरैजसो अरु औद्योगिक उद्येश्यको लागि मात्र गरिन्छ । यस्तै किसीमको प्रयोग किम्बुको रुखको पनि हुन्छ । किम्बुको
samacharpostdainik April 8, 2022 रोचक ~ खबर	0
नेपाली रँगमञ्चमा आ आफ्नै भविष्य बनाउन तल्लीनहरूको भिडमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र परिचय बनाउँदै गरेकी पछिल्लो समय मिडिय माझ निकै चर्चामा रहेकी मोडल हुन एलिना रायमाझी । २०५५ सालमा अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आएकी हुन्। अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ
२२ रुपैयाँमा छानी छानी ग’र्लफ्रेण्ड
सुन्दा अच्चम लाग्न सक्छ घटना हो– छिमेकी मुलुक चीनको । जहाँ एक सपिङ्ग मलले ग्रा’हकहरुलाई भाडामा ग्रर्लफ्रेण्ड उप’लब्ध गराइदिन्छ । यदि तपाईँले एउटा सर्त मान्नु भयो भने ती केटीहरुसँग २० मिनेट समय बिताउन सकिन्छ । २२ रुपैया अर्थात ११ फिलिपिनो पिसोमा पाइने ती यु’वतीहहरुसँग तपाईले मज्जाले समय बिताउन सक्नुहुन्छ । उक्त सपिङ्ग मलको
म ग’र्भवती बन्न चाहान्छु तर…….
पछिल्लो १० बर्षदेखि म बच्चालाई आफ्नो पेटमा हुर्काउन र उसलाई जन्म दिने सपना देखिरहेको छु । तर म बच्चा सँधैका लागि आफूसँग राख्न चाहान्न न त म आमा नै बन्न चाहान्छु । यसै कारणले मैले सेरोगेट मदर बन्ने निर्णय लिएँ जसकारण प्रसुतीपछि मलाई बच्चा मसँगै राख्न नपरोस् । सेरोगेट आमा बन्ने विचार